IJapan ukunciphisa umda wokungena kwabahambi abagonyiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » IJapan ukunciphisa umda wokungena kwabahambi abagonyiweyo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Izatifikethi zokugonya kuphela iPfizer kunye neBioNTech, iModerna kunye neAstraZeneca ziya kwamkelwa kubemi bangaphandle.
IJapan yamkele i-US, i-EU kunye nezatifikethi zokugonya zaseJapan ezivela kubakhenkethi.
Urhulumente wase-Japan ukwathathile ukunciphisa izithintelo zasekhaya ze-COVID-19.
Ezinye iingcali zonyango zilumkisa ngengozi yokususa izithintelo ngaphambi kwexesha.
Abasemagunyeni kurhulumente waseJapan babhengeze ukuba bazimisele ukukhulula iimfuno zokuvalelwa zodwa ze-COVID-19 kwabo bangena kweli lizwe ngesatifikethi esiqinisekisa ukugonyelwa ngokupheleleyo i-coronavirus kwasekuqaleni kukaSeptemba walo nyaka.
Ngokwengxelo zokuqala, ixesha lokuvalelwa lodwa emva kokuwela umda waseJapan liya kuncitshiswa ukusuka kwiiveki ezimbini ukuya kwiintsuku ezili-10.
Izatifikethi zogonyo kuphela Pfizer kunye ne-BioNTech, iModerna kunye ne-AstraZeneca ziya kwamkelwa kubemi bangaphandle.
Izatifikethi zokugonya kufuneka zikhutshwe e-USA, kumazwe e-EU okanye eJapan, ukuze zamkelwe.
Kwangoko, iSebe lezeMpilo laseJapan lakunqumamisa ukusetyenziswa malunga ne-1.63 yezigidi zeedosi Ukugonywa kweModerna ukusuka kwiibhetshi ezintathu eziveliswe eSpain. Into engaziwayo yafunyanwa kulungiselelo.
Urhulumente kulindeleke ukuba athathe isigqibo malunga nokwandisa imeko yangxamisekileyo ye-COVID-19 ngaphaya komhla wokuphelelwa ngeCawa ukuya kwi-30 ka-Septemba eTokyo kunye nezinye i-18, njengoko izibhedlele zihlala ziphantsi koxinzelelo, itsho imithombo yeqela elilawulayo.
Okwangoku, abantu baceliwe ukuba bayeke ukuhamba ngaphaya kwemida yesithili, kodwa olo hambo lunokwenzeka ukuba abantu bayigqibile irejimeni yabo yokugonya okanye banokubonisa ubungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19, itsho imithombo yolwazi ngesicwangciso.
Urhulumente uceba nokwenza lula umda wababukeli abangama-5,000 XNUMX kwimisitho emikhulu ukuba iimeko ezifanayo ziyafezekiswa.
Iindawo zokutyela ezihambelana ngqo nemilinganiselo efanelekileyo yokulwa intsholongwane ziya kuvunyelwa ukuba zinikeze utywala, ngelixa amaqela amakhulu kune amane enokutya kunye.
Ezinye iingcali zonyango zivakalise inkxalabo yokuba ngaphambi kwexesha ukuvumela abantu ukuba babuyele kubomi babo obuqhelekileyo njengoko iJapan ingekabinayo le ntsholongwane.
"Sijonge ngononophelo kwimeko yangoku yenkqubo yezonyango kwaye sithathe isigqibo" kwimeko yongxamiseko, uNdunankulu uYoshihide Suga utshilo.